IKolkata, phakathi kweyona dolophu intle eIndiya | Ukuhamba kwe-Absolut
Calcuta, ikomkhulu langaphambili leBritane India, isabugcina obunye ubungangamsha obudala, obenza ukuba ibe sisixeko esahlukileyo kwezinye izixeko ezikhulu elizweni. Nanamhlanje ihlala iyinkunzi yebhongo yelizwe laseNtshona Bengal kunye nentliziyo yenkcubeko yaseIndiya.
Into efanelekileyo ngokutyelela iCalcutta kumhambi wasentshona kukuba uya kufumana kuyo yonke eyona nto ibalulekileyo eIndiya, kodwa uya kufumana okuninzi ngakumbi. Kwaye kwesi sixeko apho kuhlala khona abantu abangaphezu kwezigidi ezihlanu baninzi imbali, ubugcisa, inkcubeko kunye nolonwabo.
IKolkata sisixeko esinezinto ezichaseneyo. Kuyo, amabhotwe kunye neendawo zokuhlala zodidi zihlala kunye nezinye zezona ndawo zihlwempuzekileyo emhlabeni, apho abadumileyo Umama Teresa uphuhlise umsebenzi ongakhathaliyo wobuntu amashumi eminyaka.
Kodwa ngaphezulu kwayo yonke loo nto, iKolkata yindawo enomdla engashiyi mntu engenamdla. Ezi zezi utyelelo olubalulekileyo:
1 Itempile yaseDakshineswar
2 IHowrah Bridge
3 ISikhumbuzo saseMaidan kunye neVictoria
4 IBelur Math
5 Olunye utyelelo olubalulekileyo eCalcutta
Esinye sezona zakhiwo zintle kwaye zinomtsalane elizweni. Inkqubo ye- Itempile yaseDakshineswar Inikezelwe ku uthixokazi uKali, ihlala igcwele abazinikeleyo kunye nabakhenkethi.
Itempile imi kwiindonga ze umlambo hooghly. Yakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX kwilinge lokunceda abantu URani Rashmoni. Ubume bayo butsalela ingqalelo kwiinqaba zayo ezisithoba ezinkulu. Sele kuvulwe ngaphakathi kwintendelezo enkulu apho abathembekileyo banokuthi banqule kwaye baphakamise imithandazo yabo kwimifanekiso eqingqiweyo emhlophe emhlophe yoothixo bamaHindu abanjengoShiva, uVishnu kunye noKali.
Ezantsi kwetempile kukho ghat, amanyathelo angcwele ehlela kunxweme lomlambo.
Ukungena kwiTempile yaseDakshineswar kukhululekile, mhlawumbi oko kuyasicacisa ukuba kutheni kusoloko kugcwele abantu.
Kwabaninzi, le yeyona icon enkulu yesixeko. Nangona igama layo elisemthethweni lingu URabindra SetuWonke umntu oseCalcutta umazi ngegama elamthiwa ngamaNgesi: Howrah ibhulorho. Yasungulwa ngo-1943 ukubonelela isixeko ngokufikelela kwidolophu ekufutshane yaseHowrah, apho ithatha khona igama layo.
IBhulorho yaseHowrah eKolkata
Esi sakhiwo sesinyithi simangalisayo sixhasa ukugcwala kwabantu: malunga ne-150.000 yezithuthi kunye nabahambi ngeenyawo abangaphezu kwama-90.000 ngosuku. Imilinganiselo yayo imi ngolu hlobo lulandelayo: 217 yeemitha ubude kunye neemitha ezingama-90 ukuphakama. Ebusuku kuyakhanya kunika umboniso omnandi kwiiCalcutenses.
ISikhumbuzo saseMaidan kunye neVictoria
Eyona paki ibalulekileyo esixekweni, eyaziwa ngexesha lama koloniyali njenge Umhlaba weBrigade Parade. Sisplanade esikhulu esinemithi kunye neendawo zengca ezikumbindi weCalcutta. Yindawo efanelekileyo yokubaleka kwizitrato zedolophu, ezinokuthi kubakhenkethi kube nzima kakhulu.
Abadlali beqakamba eMaidan eCalcutta, kunye neSikhumbuzo seVictoria ngasemva
Phakathi kwezinye izinto, eMaidan Park uya kufumana into ethandwayo Umyezo weQakamba we-Eden Gardens kunye nenkundla yomdyarho waseCalcutta.
Kodwa ngaphezu kwako konke, kwelinye icala lepaki kumi isakhiwo esihle se Isikhumbuzo seVictoria, ilitye lesikhumbuzo lokukhumbula ukumkanikazi uVictoria emva kokubhubha kwakhe ngo-1901. Ngaphakathi kukho izindlu zemyuziyam apho kuboniswa imizobo yeoyile ngobomi bukumkanikazi.
Enye into ekufuneka uyibonile eCalcutta ngokungathandabuzekiyo yitempile ye IBelur Math. Ayiyiyo nayiphi na itempile, kodwa ikhetheke kakhulu, kuba iyiyo Intliziyo yentshukumo yeRamakrishna. Into ebaluleke kakhulu kuyilo lwayo kukungangqinelani kobugcisa bobuKristu, ubuSilamsi, ubuHindu nobobuBuddha. Kwaye kukuba abakhi bayo babenenjongo yokuba le tempile yayingumqondiso wobunye beenkonzo zonke.
Itempile ye-eclectic yeBelur Math
Olunye utyelelo olubalulekileyo eCalcutta
Iindawo ezinomdla ukuzibona kunye nokufumanisa eKolkata azipheli. Kungcono ukuthatha lula kwaye unikezele usuku ngalunye lokuhlala kwakho ukuze ujonge indawo eyahlukileyo esixekweni. Isicwangciso esihle, umzekelo, kukujonga umkhondo wobukoloniyali waseBritane, esiya kuthi sifumane kuwo Fort Williamkwi Icawa yaseSan Pablo nakwisakhiwo se-neo-gothic Inkundla ePhakamileyo.
Ukuzintywilisela kubume obunemibala obunemibala besixeko, kuya kufuneka undwendwele i intengiso yeentyatyambo eMullick Ghat kunye nehaggle kwilaphu kunye nakwizitali zobugcisa ze Intengiso Entsha. Kukwafanelekile ukuhla Umzila wePhears e-Old Chinatown (iChinatown yakudala). Nangona kunjalo, ukonwabela amava e-gastronomic ikhulu leepesenti zeBangali, kuyafuneka ukuba ume kwenye yeeresityu zesiko Ipaki yesitrato.
Ukutyelela ngokukhululekileyo kunikezelwa ngu ICalcutta Botanical Garden, apho kukhula iinyibiba ezinkulu kwaye apho siza kufumana khona umthi we-banyan kwiinkulungwane ezidlulileyo. Apho uya kuthi ekugqibeleni ufumane uxolo oluncinci phakathi kweemvakalelo ezininzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » IKolkata, phakathi kweyona dolophu intle eIndiya